EGWUREGWU KACHASỊ ATỤ ANYA NKE NOVEMBER 2018: N'ELU 10 - NSOGBU EGWUREGWU - 2019
Egwuregwu iri kachasị atụ anya nke November 2018
Ndị mmepe etinyewo ọtụtụ ihe na-adọrọ mmasị maka ọnwa ikpeazụ nke mgbụsị akwụkwọ. Otu n'ime egwuregwu kachasị atụ anya nke November 2018 bụ egwuregwu arụ ọrụ, ndị na-agba égbè, ndị na-eme ihe nkiri, na ihe nkiri. Site n'enyemaka ha, a na-eburu ndị na-eme egwuregwu gaa na mbara ala dị anya, na ụwa egwuregwu na n'oge ndị ọzọ.
Top 10 kacha echere egwuregwu nke November 2018
Onye Nwuru Anwu Na-aga Nwunye
Ọrụ ugbo 19
Mmiri na-arị elu
Ọchịchị Spyro na-achị ụwa
11-11: Ncheta echeta
Ụfọdụ n'ime egwuregwu ndị a na-echere ogologo oge abiala. Ndị ọzọ na-echere oge ha: a ga-ahazi usoro maka ntọhapụ nke oru ruo ngwụsị November. Ihe ọhụrụ ga - apụta kwa ụbọchị.
Ọnụ nke mbipụta mbipụta Warfield V bụ 2999 rubles, Deluxe - 3999 rubles
Onye na-agba égbè mbụ, nke na-ewere ọnọdụ n'ọgbọ agha nke Agha Ụwa nke Abụọ. Onye ọrụ ahụ nwere ike ịhọrọ ọnọdụ na-adọrọ mmasị maka ya - multiplayer "Big arụmọrụ" ma ọ bụ "Ngwakọta agha". Tụkwasị na nke a, ọ ga-ekwe omume ịchọpụta ọdịnihu nke dike ọ bụla na "Akụkọ Agha." A ga-ahapụ egwuregwu ahụ na November 20 maka PC, Xbox One, PS4.
Na mbido, a tọhapụrụ ntọala maka October 19, ma e debere ya na November. Ndị mmepe kwadoro nke a site na ime mgbanwe ikpeazụ, mana n'otu oge ahụ, o mere ka o kwe omume ịsọ mpi na nnukwu ọrụ ndị ọzọ - Oku nke Ọrụ: Black Ops 4 na Red Dead Deademption 2.
Oge nke ihe egwuregwu - October 27, 2102, afọ 25 mgbe agha gasịrị
Ụgha Ụgha 76 na-eme ka onye ọrụ ahụ banye n'ọchịchịrị na-achachi anya nuklia. Otu ụzọ n'ụzọ anọ nke narị afọ mgbe ọdachi ahụ gasịrị, ndị dị ndụ na-ahapụ "Vault 76" iji nyochaa ụwa ma malite ịmalite ebe obibi ọhụrụ.
A na-etinye uche na ọnọdụ multiplayer: ndị egwuregwu nwere ike ịgbakọta iji weghachi obodo na nchebe ha, ma ọ bụ, ọzọ, maka mwakpo ọhụrụ na mpaghara site na iji ngwá agha na-egbu egbu. Ihe oru ngo a na PS4, Xbox One na PC ga-eme na November 14.
Echere echiche Fallout Online na njedebe afọ 1990 na Black Isle Studios, ma ndị mmepe hapụrụ echiche a.
N'akụkọ ahụ, Agent 47 ga - emezuga ihe mgbaru ọsọ ndị a họpụtara, ma na-amụkwa nkọwa nke oge gara aga.
Na akụkụ nke abụọ nke ọrụ a ma ama, onye ọrụ protegonist Agent 47 na-enweta ụdị ngwá agha ọhụrụ, bụ nke bara uru maka ịrụ ọrụ ndị siri ike. Arsenal ga-agbasawanye na ebe ọ bụla ọrụ. E nwere isii n'ime ha, ihe nke ọ bụla na-eme n'akụkụ dị iche iche nke ụwa - site na megacities ruo oke ohia. A ga-enwe egwuregwu ahụ na November 13 na nhọrọ maka PC, PS4, Xbox One na Mac.
A họọrọ Sean Bean onye na-eme ihe nkiri dịka ihe nṅomi maka otu n'ime ihe odide ahụ na egwuregwu ahụ. Ha ghọrọ Mark Faba gburu - ihe mgbaru ọsọ mbụ a chọrọ iwepụ n'oge ụfọdụ. Ndị mmepe nyere aha a aha ahụ bụ Anwụghị anwụ, na-eme ihe ọchị na Bean na-arụ ọrụ ndị dike na-anwụ anwụ mgbe nile.
E kere egwuregwu ahụ na òkè Robert Kirkman, onye dere akwụkwọ mbụ bụ The Walking Dead
Onye ọzọ na-agba égbè maka PS4, PC na Xbox One. Egwuregwu ahụ nwere isi ihe anọ bụ ndị na-emegide ọtụtụ zombies. N'ime oge dị n'etiti esemokwu na nnukwu anụ, ndị agha na-eme nchọpụta n'obodo ndị a gbahapụrụ agbahapụ, ịchọ ngwá agha, nakwa ndị mmadụ lanarịrị mgbe ọdachi dakwasịrị ụwa. Onye ọ bụla n'ime ihe odide ndị ahụ nwere nkà onwe ya nke ga-eme ka ọhụụ ọ bụla mezue.
A tọhapụrụ egwuregwu ahụ na PC na November 6, ndị nwe PS4 na Xbox One ga-enwe ike ịzụta ya na November 8.
N'ihi ụkọ akụ nke THQ, otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ego agaraghị apụta, mana e zigara ụlọ ọrụ Nordic Games (taa - THQ Nordic)
Omume site n'aka onye nke atọ. Isi agwa bụ nwanyị na-agba ịnyịnya nke Apọkalips, nke a maara dịka Rage. Na Darksiders III ọrụ ya bụ mbibi nke mmehie asaa dị egwu. Iji mee nke a, ị ghaghị iji nlezianya nyochaa ụwa gbara anyị gburugburu, yana ikere òkè n'ịlụ ọgụ, ebe Rage ji ngwá agha na egwu dị egwu. PC, Xbox One na PS4 ndị ọrụ ga-enwe ike ịtụle egwuregwu na November 27th.
Aha ahụ na-egosi na gameplay ("jụụ" - "jụụ", "nkịtị") - na egwuregwu ahụ enweghi ụda
Egwuregwu maka PC na PS4 na-adọrọ mmasị na ngwakọta nke ntinye fim na mmetụta kọmputa. Isi ihe a na-eme bụ onye ogbi Dane, onye chọrọ igosipụta ịghana ihe dị egwu n'obodo ukwu dị egwu n'otu abalị. Ebuolarịrị ọrụ ahụ - ntọhapụ mere na November 1.
Na mmelite otu izu mgbe a tọhapụrụ ya, ndị mmepe kwere nkwa ịgbakwunye ọnọdụ ọhụrụ nke ụda dị mkpa iji nweta nkọwa zuru ezu nke ibé ahụ ga-adị.
Ụgwọ egwuregwu - 34.99 euro
Nke a bụ usoro ọhụụ nke otu simulator amara nke ọma na ígwè ọrụ gbanwetụrụ na ndị ọkachamara dị mma. Onye ọrụ ahụ nwetara ohere iji nwalee onwe ya dika onye ọrụ ubi n'akụkụ atọ nke ụwa. Ọzọkwa, a na-enyekwa ọtụtụ ọnọdụ multiplayer: n'otu ugbo nwere ike ịrụ ọrụ ruo 16 mmadụ n'otu oge. Egwuregwu Farming Simulator 19, nke a kwadoro maka PS4, PC, Mac na Xbox One, natara usoro egwuregwu ndị a na-esonụ:
osisi a kụrụ.
Ntọhapụ nke egwuregwu ahụ ga-ewere ọnọdụ na November 20.
Ascent Ascendant - ihe omimi ideo na Ultima
Omume nke egwuregwu a na-ewere ọnọdụ na ihe ize ndụ zuru ezu nke abyss Stygian, ebe ha na-ebi ma na-alụ ọgụ mgbe ụfọdụ, na-emeri ókèala ndị ọzọ, agbụrụ nke elves, ndị siri ike na ndị mmadụ dị ka fungi. Onye ọkpụkpọ ahụ nwere ike ịhọrọ otu mpaghara ịlụ agha, na-agagharị na ụlọ mkpọrọ na catacombs. A haziri egwuregwu ahụ maka PC, a ga-eme ka a tọhapụ ya na November 15.
Ntọhapụ mbụ nke aha, Spyro na dragọn ahụ, bụ nke a kwadoro na ọdịda 1998 na North America na Europe, na ọnwa isii ka e mesịrị, na Japan
N'ihi na PS4 na Xbox One, a trilogy banyere obere dragọn aha ya bụ Spyro e republished, ntọhapụ ga-ewere ọnọdụ na November 13th Na nsụgharị ọhụrụ ya, onye na-emepụta ihe nkiri na-aghọ ihe dị egwu: ọ na-emelite foto na ụda, dezie usoro nzọpụta. Ihe ọ bụla ọzọ bụ otu: dragọn ahụ ka na-agagharị n'ụwa, na-arụ ọrụ dịgasị iche - site na ntọhapụ nke ndị mkpọrọ ibe gị gaa nyocha maka ihe ndị ọzọ.
Dị ka echiche mbụ ahụ si dị, onye agha ahụ kwesịrị ịbụ onye toro eto na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ aha ya bụ Pete.
A na-eme ihe ngosi nke egwuregwu ahụ n'ụdị ịkepụta mmiricolor.
Ihe egwuregwu egwuregwu ahụ na-ewere ọnọdụ n'oge Agha Ụwa Mbụ. N'otu oge ahụ, ihe niile na-eme na-egosi na ọhụụ pụrụ iche pụrụ iche, na-enye echiche doro anya na ọbụna nghọta nke agha site na ndị na-etinye aka na agha. Egwuregwu ahụ ga-adị na PS4, PC na Xbox One nyiwe na November 9.
Ọgwụgwụ nke mgbụsị akwụkwọ bara ọgaranya n'egwuregwu egwuregwu ndị e mere maka ndị dị iche iche site na afọ na ọdịmma. Onye ọ bụla ga - achọta nke ya: onye ga - enwe mmasị na ihe nkiri nke dragọn ahụ, ndị ọzọ - nchịkọta nke Agha Ụwa Mbụ, na nke atọ - mkpọsa ịgha mkpụrụ, na owuwe ihe ubi nke ubi ndị ọrụ ugbo.